Ukuguquka kwesimo sezulu kuzokhiqiza abantu abampofu abayizigidi eziyikhulu ngaphezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu akuthinti kuphela imvelo yasemhlabeni neyasolwandle emhlabeni jikelele. Futhi kunemiphumela emibi emnothweni wabantu. Ngenxa yemithelela enayo ensimini nasemisebenzini yabantu (okuxakayo ukuthi, kwimisebenzi efanayo eyenzayo), iBhange Lomhlaba lixwayise ngokuguquka kwesimo sezulu uzokhiqiza abantu abampofu abangaphezu kwezigidi eziyikhulu ngonyaka we-100.
Lokhu kungancishiswa uma izindlela zamanje zokusetshenziswa ziguqulwa futhi kuthathwa izinyathelo eziya ekushintsheni kwamandla kususelwa emandleni avuselelekayo njengomthombo wamandla, ngaphezu kokufezeka. izinjongo ezibekwe Yisivumelwano SaseParis.
3 Izimo zokuphelelwa yithemba
4 Isimo siyashintsha
Engxoxweni ekhishwe namuhla yiphephandaba laseFrance i- "Le Figaro", umqondisi jikelele weBhange Lomhlaba, uKristalina Georgieva, uqokomisa ukuthi yize ukufudumala komhlaba kuthinta umhlaba wonke, ubungozi bubaluleke kakhulu emazweni ampofu, yingakho kumele sibasize ngamandla futhi "ngokushesha" ukuvumelanisa nengqalasizinda yabo nokwenza ezolimo zabo ziguquke.
Ezolimo zona ziyimbangela yokuxhashazwa kwamanzi ngokweqile nokungcoliswa kwama-aquifers. Ngaphezu kwalokho, kuyimbangela yokuqothulwa kwamahlathi ezigidi zamahektha ngonyaka, ngakho-ke akusona isixazululo esiphelele. Kodwa-ke, kuyadingeka, ngoba ngaso sonke isikhathi emhlabeni kunemilomo eminingi yokondla, futhi ezolimo nazo ziyasiza ekwamukelweni kwe-CO2 yi-photosynthesis eyenziwa izitshalo.
Kunabantu abayizigidi ezingama-500 esimeni esibucayi kakhulu emazweni anjengeHaiti, i-Iraq, iSyria noma iLibya kanye nase-Afrika. Lezi zindawo zihlangabezana nezingxabano ezihlobene nezikhali nezimpi eziholela ebuphofwini obukhulu, kepha ziyathinteka futhi, ngokuguquka kwesimo sezulu.
Ukufanekisa lokhu, kwaqubuka ukungqubuzana eSyria okwenzeka ngesikhathi esisodwa nesomiso okwadala ukuthi abantu basemaphandleni bathuthele emadolobheni. Lapho ngesikhathi esifushane isibalo sabantu sisondela enhlanganweni yasemadolobheni, isidingo semithombo siyakhula. Uma isomiso singanikeli wonke umuntu amanzi, impi yezinsizakusebenza iyaqala.
Esinye isibonelo se- izimpi ezihlomile nokuguquka kwesimo sezulu kuhlobene kakhulu ukuthi enyakatho neMali ukukhiqizwa komhlaba okuphansi okunomphumela omubi omubi emphakathini kwathanda ukungazinzi kwezepolitiki.
Izimo zokuphelelwa yithemba
Njengoba ubhekene nalezi zimo lapho izinsiza zanda kakhulu inani labantu, kudala ukungazinzi, izimpi nokwanda kwezifo nokufa, kungenzeka kakhulu ukuthi inani lokufuduswa kwabantu liye kwezinye izindawo ngokungahambisani nentando yabo. Ukufuduka ukuphela kwendlela yokuphunyuka emindenini eminingi engakwazi ukuqhubeka nomsebenzi wayo ngenxa yokushoda kwezinsizakusebenza noma ukwesaba impi.
Ngokwe-UN, manje sekunezigidi ezingama-65, kanti ezingama-21 zazo zingababaleki bezepolitiki, okuwumlando ogciniwe wokufuduswa kwabantu baye ezindaweni eziphephile. IBhange Lomhlaba, njengoba kukhonjiswe yilowo owayenguKhomishani we-European Humanitarian Aid kanye neBudget, linikele isilinganiso semali eyizigidi ezingama-10.000 XNUMX zamadola ngonyaka ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu eminyakeni yamuva.
Kusukela ngo-2020, kuzokwenziwa izinhlelo ezizonikezela Ama-28% wezindlela zakho zezezimali ukunciphisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ezindaweni ezisengozini kakhulu nezintekenteke. Lokhu kuzosiza nokugwema ukungqubuzana kwezepolitiki ngenxa yezintshisekelo nokushoda kwezinsizakusebenza ezinjengamanzi.
Akumele sikhohlwe ukuthi izimo esiphila kuzo zizoshintsha ngokuguquka kwesimo sezulu. Ngokwenyuka kwamazinga olwandle, amadolobha asogwini azothutha futhi aguqulwe. Ngakolunye uhlangothi, ohulumeni kumele babele ingxenye enkulu ye-GDP yamazwe okufanele bayifeze izinhlelo zokuzivumelanisa nezimo ngokumelene nokuguquka kwesimo sezulu
Isimo esisilindeleyo asinathemba kakhulu, ngakho-ke zonke izenzo esizenzayo manje zimbalwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kuzokhiqiza abantu abampofu abangaphezu kwezigidi eziyi-100